10 yakakosha amazon prime mabhenefiti iwe yausina kuziva & apos; nezve nezve (2021)
Kuru Nhau & Ongororo 10 yakakosha Amazon Prime mabhenefiti iwe yausina kuziva & apos; nezve nezve (2021)
10 yakakosha Amazon Prime mabhenefiti iwe yausina kuziva & apos; nezve nezve (2021)
Kana iwe wakanyoreswa kuAmazon Prime, pane & apos; s pamwe chimwe kana zviviri zvikonzero zvikuru zveizvozvo. Ehezve, inozivikanwa kwazvo ichave iyo yekuendesa mabhenefiti, ayo anotendera iwe kusarudza kubva kumamirioni ezvinhu izvo zvinounzwa kumusuwo wako mumazuva 1-2, kana kunyangwe pazuva rimwe chete! Zvichienderana nekuti unotora kangani masevhisi aya, zvinonetsa kutaura kunyangwe iwe Amazon Prime nhengo yakakosha .
Tora Amazon Prime izvozvi, kusanganisira 30-mazuva emahara kuyedzwa!
Chimwe chikonzero chikuru chekuve nhengo ndeye Prime Vhidhiyo, kwaunogona kuwana mamwe akatanhamara uye anodiwa akateedzana seMarvellous Mai Maisel, Vakomana, uye mamwe emhando dzenhando senge Shamwari, Hofisi, uye zvimwe zvakawanda.
Mimwe yemafirimu anotengesa zvakanyanya emakore mashoma apfuura akasunungurwawo paPrime Video. Semuenzaniso, Borat's yakareba-yakatarwa kuteedzana Borat Inoteedzana Moviefilm yaive neese makuru ekushambadzira evanopa sevhisi kurwira pamusoro pekodzero dzeiyo firimu. Sekureva kwemishumo, Jeff Bezos nekambani vakahwina bhizimusi nekubhadhara musoro-kutenderera madhora makumi masere emadhora. Tichifunga nezvekuti maAmazon & apos; s boss ndiye murume akapfuma kwazvo pasirese, tinogona kutarisira kuti mamwe mablackbusters pachikuva.
Kunyangwe tichifunga kuti vazhinji venyu munoziva chii Prime Day ndeye, imwe haina & apos; hazvireve kuti inyore kuAmazon Prime kuti uwane mukana wePrime Day wega - saka zviri nyore kukanganwa nezvazvo! Gore rega rega kubvira 2015 Amazon yakapa mamwe madhiri anoshamisa pane ako aunofarira mafoni, mapiritsi, ekupfeka, uye zvimwe zvakawanda. Mhando dzinosanganisira Apple , Samsung , Bose, Sony , uyezve, zvishandiso zveAmazon zvine hungwaru. Kuchavawo madhiri makuru paTV . Zvirokwazvo, a Chishanu Chishanu -level chiitiko, chausingafanire kupotsa, kana iwe uri nhengo yepamusoro. Prime Day yegore rino iri kutarisirwa kuitwa muna Chikumi.
Prime Dhirivhari, Prime Vhidhiyo, uye Prime Day zvimwe ndiwo anozivikanwa uye akakosha masevhisi anopihwa nehunhu hwako, uye chikonzero chikuru chekunyorera kuPrime.
Nekudaro, isu tinoda kukubatsira iwe kuwana zvakanyanyisa kubva kune zvese izvo Prime Prime anofanira kupa, uye ndosaka tasarudza edu eanodiwa eAmazon Prime mabhenefiti, ayo aungave usinga zive nawo! Izvo zvakanyorwa zvisina kurongeka, asi isu tine chokwadi chekuti uchasarudza izvo zvakakosha kwazvo kwauri.
Chokwadi, hazvisi Amazon Music Isingagumi, iyo inokupa iwe kuwana kune mamirioni makumi manomwe enziyo, asi ngatitendere iwe kutenderera mamirioni maviri enziyo uye podcast pane-inoda. Iyo yakakwana kune vateereri vasina kujairika, uye iwe ungangodaro usingazomboda kukwidziridzwa kune Unlimited kana iwe uchikwanisa kuwana ako ese aunofarira maalbhamu pane yakajairwa vhezheni yeapp. Zvakadaro, kana iwe uchida kunyoreswa kweprimiyamu kune inoyerera sevhisi, tarisa yedu mega mimhanzi yekushambadzira masevhisi kuenzanisa kuti uone kuti ndeipi yakakunakira iwe.
2. Mifananidzo yeAmazon
Isu & apos; tiri kurarama munguva yegore. Izvo zvakakomba izvo zvakapusa uye zvinoshamisa! Negadziriro yeparutivi uye mugove ako mafoto neusingagumi, yakazara-resolution foto chengetedzo. Iwe unogona kuwedzera yako mifananidzo mune yemahara Amazon Mifananidzo app ye Android / ios uye pamhepo uye wozviona pane ako ese madhiraivhu kubva chero kupi pasi. Hapana SSD, flash drive, kana memori kadhi inodiwa. Isu takataura here kuti iyo & apos; ZVEMAHARA !?
3. Goverana mabhenefiti ako ePamusoro
Wanga uchiziva here kuti unogona kubatanidza account yako neumwe munhu mukuru kuti ugovane kutumira, kutenderera kupinda kumafirimu / TV maTV, Prime Kuverenga, uye Prime Mifananidzo? Kana usina, unogamuchirwa! Iye zvino unogona kupatsanura mutengo wehunhu hwako hwepamberi newaunogara naye usingatombonzwa kubirwa nekugovana password yako mahara! Uyezve, vadzidzi vanowana dhisikaundi, saka zvechokwadi kuba.
4. Prime Kuverenga
Inosanganisirwa muAmazon Prime nhengo yako, Prime Reading inoita kuti kadhi rako reraibhurari rizorore richida yega e-raibhurari ine sarudzo yemabhuku anodarika chiuru nemagazini. Iyi inogoverwawo mumba mako, zvichireva kuti iwe unogona kugovera account yako yekuverenga nenhengo dzemhuri kana shamwari. Mazita anozivikanwa anosanganisira Harry Potter neMuroyi & apos; s Dombo naJK Rowling uye Iyo Butterfly Bindu naDot Hutchison. Kuverenga kunokutendera kuti uterere kumabhuku ehurukuro pasina kudikanwa kwekunyoresa Kunonzwika!
5. Wadhirobe Wepamusoro
Izvo zviri nyore: Iwe unoraira, uye edza mbatya, shangu, zvishongo uye zvishongedzo kumba. Ipapo chete ndipo paunosarudza kana iwe uchida kubhadhara nekuzvichengeta, kana kungozvitumira zvakare kuAmazon. Zviri Zappos 'runlimited' pane steroid. Isu tinoona izvi zvichibatsira kune vanotengesa fussy, asiwo kune vanhu vane mashoma kufamba, vasingakwanise kuenda kuchitoro. Zvirokwazvo yakanaka!
6. Mahara ultrafast grocery kuendesa
Wakamborota uchiita yako yekutenga kunotenga kubva kunyaradzo yeimba yako? Na Prime, unogona. Iwe unofanirwa kutenga kuAmazon Fresh kana Yese Yekudya Musika, asi kunyangwe zvakadaro, ibasa rinogona kuchengetedza zuva!
Ziva kuti sezvazviri izvi zvinongowanikwa mumaguta gumi nemashanu eUS: Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Las Vegas, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Diego, San Francisco, Seattle, uye Washington DC
7. Kiyi neAmazon
Izvi hazvinyatso kujeka kana iwe ukatarisa zita racho, asi zvazvinogonesa ndezvechokwadi zvinoshamisa. 'Kiyi' inoita kuti iwe ugamuchire maAmazon mapakeji akachengeteka mukati memba yako, garaji, kana kunyangwe mumotokari yako - yakakwana kune avo vari kufamba. Yakachengeteka zvakare. Unogona kutarisa chinzvimbo chemusuwo wedu uye nekutarisa kuendesa kubva kuKiyi neAmazon App.
8. Amazon Vana +
Yaimbozivikanwa se FreeTime Unlimited , Amazon Vana + inokupa kuwana kusingagumi kuzviuru zvemabhuku anobatsira vana, mafirimu, zvirongwa zveTV, maapplication edzidzo, mitambo, uye hunyanzvi hwemwana wekutanga. Nehurombo, mune ino kesi iwe uchatofanirwa kunyorera zvakasiyana, asi maPrime nhengo anowana 40% dhisikaundi, achiunza mutengo kune chete $ 2.99 pamwedzi!
9. Zvinonzwika zvinonzwika
Zvakanaka, sezvaungave uchiziva, Inonzwika ikambani yeAmazon. Nhengo dzePrimary dzinowana chero mazita maviri emahara neAnonzwika Premium Plus kutongwa uye kunyoreswa. Kana usiri Prime minister, unowana chete. Zvakare, Iyo Inonzwika Plus Catalog inokupa iwe kuwana kune mapodcast, kutungamirirwa hutano, uye Inonzwika Mavambo!
10. Yemahara, yekukurumidza kutumira pane ese maZappos maodha
Kungofanana Kunzwika, Woot! uye Twitch, Zappos inowanikwawo neAmazon! Naizvozvo, iwe unowana zvimwe zvakasarudzika zvinoshamwaridzana nemirairo yako ipapo. Iwe unowana 30-zuva 'runlimited garandi', iyo inoita kuti iwe ufuke shangu dzako kwemazuva makumi matatu usati wafunga kuzvichengeta; Kutumira kukuru; a 10% mudzidzi, mudzidzisi, uye zvemauto kudzikisira, uye nezvimwe.
Yako yeAmazon Prime nhengo haisi chete yekunyorera kunyorera inoitika kuti iwe utarise mamwe ako aunofarira mafirimu pane Prime Vhidhiyo. Izvo & apos; zvakanyanya zvakanyanya! Iwo mabhenefiti gumi isu & apos; atakanyora anoshamisa, asi chokwadi chiripo chiripo chakatowanda. Pamwe chete, ivo vanogona kukusevha yakawanda zviwanikwa!
Semuenzaniso, Prime Wardrobe mukana wakanaka kwazvo wekuchengetedza nguva kubva kuzvitoro muchitoro, uye isu tinoziva izvozvonguvandizvomari. Prime Mifananidzo inogona kukusevhesa mazana emadhora, sezvo iwe usati watunda & apos; isingade yekunze yekuchengetera drive yekuchengetedza ako mapikicha nemavhidhiyo.
Iwe unogona kuwana ruzivo nezveese mabhenefiti akaisirwa neako Amazon Prime nhengo pano .
iphone x vs galaxy cherechedzo 9
lg g2 vs giraxy s5
Iyo LG V10 ndeye MIL-STD-810G Transit Drop inoenderana, uye apa & apos; izvo zvinorevei
Akanakisa Amazon Prime Day nharembozha inobata: Samsung Galaxy, LG, Motorola, OnePlus, nezvimwe
Verizon & apos; s pre Black Chishanu chibvumirano: Kumisikidza, Kwidziridza mari inobviswa kubva munaNovember 17 kusvika 23
HTC Imwe (M8) mutengo uye zuva rekuburitsa
B & O Beoplay E8 Wireless Nzeve Maonero Ongororo
Iyo iPhone XR kuburitswa zuva nhasi, kune zvine mwero madhiri uye Apple Store kuvhura mitsara
Google Nexus 6P vs Samsung Galaxy Cherechedzo 5
Apple iPhone 7 vs Samsung Galaxy S7 Edge: kamera kuenzanisa
Tarisa uone aya anotonhorera matsva iPhone SE (2020) madhiri kuBoost neMetro neT-Mobile
T-Mobile ichakurumidza kuwana hukuru hwekutengesa tsoka muzvitoro zveBest Buy neWalmart